Boqolaal shacab ah oo ku sii qulqulaya cisbitalka Boosaaso, dhacdooyin murugo leh oo ka dhacay & meydad la dhigay
Cisbitaalka weyn ee Boosaaso waxaa maalintii labaad yaala Meydka gabar yar oo si xun loo diley isla markaana meydkeeda laga helay xaafada Raf iyo Raaxo agagaarka halka loo yaqaano Balbala-weyn.
Boqolaal kamid ah shacabka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay buux-dhaafiyeen Cisbitaalka waxaana wali la la’yahay ehelada iyo waalidiinta dhalay gabadhan yar, inkastoo Waalidiin ay caruuro ka maqan yihiin ay joogaan cisbitaalka.
Laamaha kala duwan ee Puntland ayaan xil weyn iska saarin, sidii loo heli lahaa ehelada gabadha u geeriyootay nooc kamid ah tacadi lagula kacay, kadib markii la aqoonsan waayey gabadhaasi oo da’deeda lagu qiyaasay 14 sano jir.
Arrimaha xusidda mudan waxaa qeyb ka ah in dad shacab ah ay ska uruuriyeen lacagta Talaagada lagu rido meydka, kadib markii saacado badan uu meydka gabadha saarnaa dhagaxa loogu talagalay in la saaro.
Dawladda puntland waa in la hubiyaa websidka iyo cidda iska leh, webkaan wuxuu Qatar ku yahay dhulkaas soomaaliyed ee nabadda ah, puntland gabi ahaan waa ineey tillaabo ka qaaddo webkaan borobogaanka ku shaqaysa, waxaa laga yaaboo inuu xiriir la Leeyahay wenkaan ururada argagixisada ah runtii shaki weyn ayaan ka qabaa inuu webkaan alshabaab la shaqeeyo, runtii waa nä dhibeeysaa dhul soomaaliyed oo nabad ah in fidno iyo qas laga dhex wado lama daawan karo Waxa uu wado webkaan waana ineey puntland tillaabo ka qaadaa.
Hadii maxamuud salabeen xaare xukun jecel DUF KUBAX yaasha hadii laga wax laga sheego website kaa anti Puntland. Waxaad tahay XOOOLO
Kkkkk Dadka qaar wey waalan yihiin,war haddii maamul la eedeeyo ma ahan in beel la eedeeyay.
Dhibka federalka ayaa halkaa ka muuqda.
@ALI boobe hospital Isla gaar,waxaad jeceshihiin in aad aragtidiina dhiibataa website MS sida Puntlandi maxaa kaa hor istaagay in aad tiraa hala xiro.
WAAD KU WAALATEEN SIYAASADDA
Ali xun puntland wax lagama sheegin ee diyaasadda xun ee deni ayaa la dhaliilay, muwaadin la dhibaateeyay haddii la yiraahdo hala ilaaliyo xaqiisana hala raadiyo, ma puntland ayaa wax loo dhimay? Lacagaha diyaaradaha iyo xafladaha lagu bixiyo maxaa amniga loogu sugi waayay, nin ka maxamuud saleebaan maagayana waxaan oran lahaa, arin kaas inbadan raali kama ahane ogoow, oo shaqsi xun qabiil malahane ogoow.